Indlu yangasese yakho ayisiyiDoti: izinto ezi-5 ekungafanelekanga ukuba zibaletsele
Isilimela 06, 2016 by okwenyaniWW, Iimbono zizonke:
Nangona izindlu zangasese kunye neekoti zokulahla inkunkuma zizixhobo zokulahla inkunkuma, indlu yangasese ayisiyindawo inkunkuma. Rhoqo, abantu batshiza izinto ezithi zibangele ii-clogs kunye nokuhamba ngasemva okubangela ukugcwala kwezindlu zangasese kunye nomonakalo kwiinethiwekhi zokugcina amanzi. Ngamanye amaxesha umonakalo ubangela ukulungiswa okuphezulu kunye neprimiyamu ephezulu yeinshurensi yepropathi. Nazi ezinye izinto onokuthi uhendwe ukuba uzikhuphe, kodwa ngokuqinisekileyo akufuneki.
Iinwele zoMntu kunye nezeThumba
Ngokungafani nephepha lendlu yangasese, iinwele aziqhekezi ngokukhawuleza xa zivelisiwe emanzini. Endaweni yoko, igqitha kwimibhobho ide ifike kwi-bend okanye kwindawo enqabileyo yangaphakathi kwaye i-clumps. Iinwele zodwa emva koko zibangela ukuvaleka okanye ezinye izinto zinamathele kuyo kwaye zithintele umbhobho.
Iimveliso zezeMpilo kunye nezoBuhle
Iimveliso ezininzi zezempilo kunye nobuhle ziyilelwe ukumanzisa ulwelo endaweni yokunyibilika, kubandakanya iibhola zekotoni, ukucheba ngomqhaphu, iintsholongwane zomntwana kunye neelensi, iidapile, iipampons kunye neebhedi. Iimveliso ezinje ngeflash yamazinyo, iintambo ze-tampon kunye neziqhina zeenwele ezotyiweyo zinesiphumo esifanayo neenwele. Ukongeza, ezinye iimveliso zineeplastiki, izinyithi kunye nezinye izinto ezithi zithathe ixesha elide ukophula emanzini. Sukugungxula iileyiti zepanty kunye neengubo zedolophu, iintloko zerhafu enokulahlwa okanye iibhandeji ezinamathelayo.
Unyango kunye neziyobisi ze-OTC
Iziyobisi zineekhemikhali ekunzima ukuzisusa kwimithombo yamanzi eluntwini ngaphandle kwezixhobo ezikhethekileyo. Uninzi lwezityalo zokugcina amanzi azinazo izixhobo ezifanelekileyo zokususa ezi khemikhali. Amachiza athile anjengee-antibiotics abulala zombini iibacteria ezilungileyo nezingalunganga kunye nezinye iintsholongwane zihamba kwiinkqubo zamanzi amdaka ziye kumhlaba ongaphezulu nangaphantsi komhlaba wamanzi amatsha. Amanye amachiza, anjengehomoni kunye nee-steroid, nawo abangela utshintsho olungenampilo lomzimba kwindlela yokuphila esekwe emanzini.
Ngokucacileyo, iimveliso zokucoca azilunganga kunamayeza nangamayeza aphezulu xa kusenziwa ukwakheka kwawo. Iimveliso ezininzi zokucoca zineekhemikhali ezenzelwe ukutshabalalisa iintsholongwane. Ezinye ziqukethe izinto ezinetyhefu ezibangela umhlaza kunye nolunye utshintsho olungenampilo kwizityalo nakwizilwanyana. Iimveliso zamaphepha "amkelekayo" aliqela ahluleka ukophula ngokukhawuleza kwimibhobho kwaye zibangela iishegi. Iingubo zokucoca iMicro ezincinci azizonakalisi kwaphela.
Ngapha koko nayiphi na enye inkunkuma enokuthi ivimbe imibhobho okanye zonakalise izityalo kunye nezilwanyana kunokubangela ukulungiswa kakhulu okanye imeko yongxamiseko. Ekuphela kwezinto onokuhlala ugungxula phantsi kwindlu yangasese inkunkuma ngokwasemzimbeni, njengomchamo, amachaphaza, ukugabha, kunye nephepha lendlu yangasese. Sebenzisa umgqomo wenkunkuma kwindawo yonke.
Ukusetyenziswa gwenxa kwamandla akho okulahla kwendlu yakho yangasese kunokuba yingozi kwitanki lakho le-septic ekuhambeni kwexesha. Iingcali ezifana Ukuntywila kombhobho wesandi banazo izixhobo zokucoca izixhobo zokucoca iibhobho zakho ngaphambi kokuba baphinde baxhaswe ngaphaya kokulungiswa. Sukuthandabuza ukubiza umntu onamava ngakumbi ngeengxaki zombhobho wakho. Ukulungiswa kwenkqubo yakho kunokuba yinkqubo ende kunye neendleko, ke kungcono ukukhuseleka ngaphambi kwexesha.
okwenyaniWW Juni 6, 2016
Olu ngeno yafakwa kwi Ukuphucula iKhaya noqhotyosho Izixhobo Zokucoca, Ukucoca indlu yangasese, ukucoca indlu yangasese, izixhobo zangasese. Bookmark le Permalink.
Aprili 20, 2019 Yintoni ekufuneka yenziwe nguMninimzi onke malunga neeSistic Systems Inkqubo yokusebenza kwe-septic iphatha inkunkuma yendlu-ngokuzolileyo nangesidima. Kubaluleke kakhulu kulo naliphi na ikhaya, ukanti iyajongwa kude kulungiswe inkqubo yenkqubo ye-septic. Abanini bamakhaya abaninzi, ngenxa yoko, abaqinisekanga ukuba bayigcina njani isebenza kakuhle. Nazi izinto ezimbalwa ezisisiseko ekufuneka umnini-khaya azazi malunga nenkqubo yazo yokuthunga: Oko ubeka khona kwimicimbi Ukugungxula okanye ukulahla izinto ezithile ngakwimibhobho yakho kunokonakalisa umlo kwiseti yakho […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Agasti 29, 2016 Ngaba umgangatho weHardwood ulonyusa ixabiso lakho lasekhaya? Ngaba uceba ukuthengisa ikhaya lakho? Ngaba ujonga izinto ezizakonyusa ixabiso lakho ekhaya? Enye yezona zinto zibalulekileyo umthengi azithathela ingqalelo xa uthenga indlu entsha ngumgangatho wayo. Kuyinyani ukuba imigangatho eyenziwe ngomthi iya kukhulisa ixabiso lakho ekhaya. Ke ukuba ikhaphethi igubungela imigangatho yakho eyenziwe ngomthi, emva koko cinga ukuyikhupha. Kwaye ukuba awunayo umgangatho wokhuni, ukuyifaka kungaba licebo lobulumko. Kungenxa yokuba kwezi ntsuku uninzi lwabathengi bathanda imigangatho yeenkuni kwaye bayadlula kumakhaya […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya, Ukuthengisa izindlu nomhlaba
Aprili 25, 2018 Konke okuDinga ukwaziyo malunga neeFiltha zeZiko Uninzi lwethu alwazi ukuba isiko lisebenza njani. Asazi ukuba ungayicoca njani okanye wenze utshintsho oluncinci ukuze isithando somlilo sisebenze ngokugqibeleleyo. Eyona nto siyixhalabeleyo kukuba isithando somlilo sisigcina shushu. Kuphela kuxa kungasifudumezi ngokufanelekileyo sicinga ukufumana inkonzo okanye ukulungiswa. Wonke umntu unokugcina izithando zazo zeenkozi zisebenza ngokucocekileyo ngokucoca isicoci somlilo okanye ukuba sifunwa ngokutshintsha. Inokwenziwa ngokulula kodwa kufuneka wazi ukuba leliphi icebo lokucoca elilungele […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Disemba 29, 2016 Elona Khaya Lonwabileyo: Unokuyenza njani iKhaya ukuba libe siBuhlobo bakho Uninzi lwethu, ukuzisa isilwanyana esitsha sisinyathelo esikhulu kubomi bethu. Nangona kunjalo, ngenqwaba entsha yolonwabo kuza umsebenzi omkhulu ezandleni zethu. Abanini bamakhaya abanokuthenjwa abanakukwenza konke ngokuthintela izilwanyana xa bangenisa isilwanyana esitsha endlwini yethu. Ke ngoku kweli nqaku, siya kukunika uluhlu lweengcebiso ngendlela onokuyenza ngayo ukuba indlu yakho ibe ntle-kwaye ibe ngolungelelwano ngaphandle komenzi-mveliso omtsha. Funda ukuphatha iinwele zezilwanyana Eyona nto iphambili kakhulu kwaye iphazamiseka kakhulu kubo bonke abanini bezilwanyana zonke […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Oktobha 19, 2016 Eyona ndlela intle yokufumana iglasi egadileyo Iigadi zegadi zihlala zifakelwa ukwenza indawo eyongezelelweyo yokuhlala. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zeetayile zokuphalaza igadi onokuthi ukhethe kuzo. Banokulungiswa besebenzisa izixhobo ezahlukeneyo kunye nezinto, nganye nganye inezibonelelo zazo kunye nezantsi. Ezinye zoyilo zezi: iinyibithi zentsimbi, iishenzi zeplastiki, iinkuni ezenziwe ngotshani, umaleko wokwenza ilize zokwenza umdiza kunye nezithungu ezenziwe ngomatshini onokuziphucula ngokwakho. Kunzima ukufumana ishibhile […] exhonyiweyo Yard kunye neGadi
Novemba 16, 2016 Izikhombisi eziPhezulu ezi-4 unokuziDinga Iplita Imigca yamanzi ibalulekile kubomi banamhlanje, kodwa ngenxa yokusebenziseka kwayo okumangalisayo kuza isidingo senkxaso. Nokuba yinto elula evuzayo okanye intlekele egcwele ngokupheleleyo, iiplumbers zisebenza indima ebalulekileyo kukhuseleko nasekuqineni kwemigca yamanzi. Uninzi lwabantu lwazi nje izinto ezimbalwa malunga neelayini zabo zokupheka, kwaye kubalulekile ukuhlala ufundile kwiimpawu ezinobungozi zentlekele ezayo. Ngethamsanqa, kukho izalathiso ezimbalwa eziqhelekileyo zokuba umnxeba kwi-plumber ngowokubheja kwakho, kwaye […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Julayi 12, 2017 Uyenza Njani ikhaya leNja-enobuhlobo Phantse zonke izinja, ngakumbi iinjana, zinomdla wokwazi malunga neendawo ezihlala kuzo kwaye zihlala zithanda ukwenza ubumdaka ukuba zishiywe zingalawulwa. Ukuba ufuna ukuthintela umhlobo wakho we-furry ukuba ungazilimazi kunye nezinto zakho, kubalulekile ukuba ungayiniki inja ikhaya lakho kwaye uyiguqule ibe yindawo enobuhlobo nezinja. Nantsi indlela onokuyenza ngayo. Ukuthoba umgangatho Xa kuziwa kumgangatho, umthetho ulukhuni ngakumbi - ngcono. Iithayile kunye neenkuni eziqinileyo ezifana ne-oki, i-walnut, i-cherry kunye nemephu zizezona ndlela zibalaseleyo ukuba […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Februwari 25, 2017 Iimpawu ezi-5 Ofanele Ukwazi ngaphambi kokuba uBhombu Wonke umntu uyazi ezona zinto zibalulekileyo zokulungiswa kwemibhobho efana nokuntywila, izindlu zangasese kunye neebhafu zokuhlambela, kodwa uninzi aluboni ukuba ezi ayizonto zibalulekileyo. Iimpawu ezibalulekileyo zihlala zingabonakali kodwa zidlala indima ebalulekileyo ekuqinisekiseni ukuba ukulungiswa okukhulu kusebenza ngokuchanekileyo. Andithi ungumnini wekhaya okokuqala kwaye ujonge ukuvuselela igumbi lakho lokuhlambela, zeziphi ezinye zeempawu kunye nokulungiswa kokuba kujongwa, okuya kuthi kukwazise uyilo lwakho olutsha? 1. IValve eyintloko yaManzi Le [] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya